Ra'iisul wasaaraha Lesotho: "Inta aan xilka hayo la ima maxkamadeyn karo" - BBC News Somali
Ra'iisul wasaaraha Lesotho: "Inta aan xilka hayo la ima maxkamadeyn karo"
Xigashada Sawirka, MOLISE MOLISE
Ra'iisul wasaarah iyo xaaskiisa hadda uu la nool yahay
Qareenka ra'iisul wasaaraha dalka Lesotho oo loo heysto dembi ah in uu dil geystay ayaa maxkamadda u sheegay in ra'iisul wasaaraha aanan loo maxkamadeyn karin eedeymaha loo heysto ee ah in uu wax ka ogaa dilka xaaskiisi hore.
Qareenka ayaa ku dooday in ra'iisul wasaare Thomas Thabane uu yahay qof xasaanad leh, haatanna aanan loo qabsan karin dilka xaaskiisi hore, Lipolelo Thabane oo la dilay sanadkii 2017-ka.
Kiiska loo heysto madaxa xukuumadda Lesotho ayaa loo sii gudbiyay maxkamadda sare ee dalkaas, waxaana xaaska ay haatan wada joogaan loo heystaa inay ka dambeysaa dilka haweeneydii koowaad ee dalkaas.
Arrintan ayaa ka yaabisay dad badan oo ku nool dalkan yare e ku dhex yaala wadanka Koonfur Afrika.
Qareenka difaacaya ra'iisul wasaaraha oo lagu magacaabo Qhalehang Letsika ayaa sheegay in marnaba aanan la maxkamdeyn karin madaxa xukuumadda inta uu xafiiska hayo, balse uusan ka sareynin sharciga.
Xaakimka maxkamadda ayaa kiiska u gudbiyay maxkamadda sare, taas oo arrintani u wajihi doonta sida maxkamadda dastuuriga.
Mr Thabane, oo ay da'diisu tahay 80 sano jir ayaa ka baaqsaday in uu maxakamadda yimaado toddobaadkii lasoo dhaafay, kadib markii dalka Koonfur Afrika uu u aaday hawla caafimaad.
Xigashada Sawirka, LESOTHO TIMES
Haweeneyda la dilay
Waxaa soo baxay warar sheegaya in uu u baxsaday dalka Koonfur Afrika, haseyeeshee waa uu beenniyay wararkaas.
Xaaska uu haatan qabo ayaa sidoo kale dhawaan lagu so eedeeyay inay dishay xaaskii lala qabay. Waxaa uu noqonayaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee Afrikana ah ee lagu eedeeyo inay ku lug lahaa dil isagoo xafiiska haya.
Lipolelo, oo 58 jir ahayd ayaa toogasho lagu dilay laba maalin kahor doorashadii 2017, kahor inta uusan Thabane noqon ra'iisul wasaare.
Markii la dilay xaaskiisa, waxaa uu falkii dhacay ku tilmaamay "axmaqnimo", balse booliska waxay haatan ku eedeeyeen in uu ku lug lahaa dilka xaaskiisa.
"Booliska waxay hataan ka shaqeynayaan sidii maxkamad loo soo taagi lahaa", ayay sheegeen booliska Lesotho.
Sidoo kale taliye ku xigeenka booliska Lesotho, Paseka Mokete ayaa isna xaqiijiyay in ra'iisul wasaaraha maxkamad lasoo taagi doona.
Muxuu arrintan ka yiri ra'iisul wasaaraha?
Mr Thabane oo maalma kahor la hadlay warbaahinta Qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dalkiisa uu ugu adeegay si hufan, xilkana uu ka degi doona bartamaha sanadkan, waxaana uu yiri: "Waxaan ka shaqeeyay Lesotho xasiloon oo nabad ah, da'da aan haatan joogana waxaa muuqto in aan daalay".
Xisbiga talada haya ayaa ra'iisul wasaaraha u qabtay in kama dambeys uu isku casilo muddo toddobaad ah.
Waxaa lagu soo warramayaa inay adag tahay in ra'iisul wasaraaha Lesotho uu arintan ka weecdo, waxaana taas ay dalka Lesotho u horseedi doontaa dhibaato dhanka dastuurka ah, maadaama hogaamiye xil haya aanan maxkamad lasoo taagi karin.
Xilliga la dilay waxaa uu khilaaf ku saabsan furriin kala dhaxeeyay ra'iisul wasaare Thabane, waaana xilligaas uu ra'iisul wasaaraha la joogay xaaska uu hataan qabo ee Maesaiah.
Maesaiah oo ah xaaska hataan u dhexda ra'iisul wasaraaha ayaa Thabane kala qeybgashay xafladda dhaarinta iyadoo tacsida ay taalo.
Israel oo Iiraan ku eedaysay argagixisnimo kadib weerarkii markab shidaal?
Dhagax malaayiin dollar jooga oo laga helay ceel gudihiis